VOLA 114 MILIARA ARIARY AVY AMIN’NY BAD : Nankatoavin’ny Hcc ny hanajariana ny tandavanala sy ny varotra
Nankatoavin’ny Fitsarana avo momba ny Lalàmpanorenana ny didy hitsivolana laharana faha 2019-010 izay manome alalana ny findramam-bola momba ny tetikasa ho fanajariana ny tandavanala sy ny varotra. 11 juin 2019
Tetikasa goavana izay iarahan’ny firenena Malagasy sy ny banky Afrikanina momba ny fampandrosoana na ny Bad. Ny datin’ny 17 desambra 2018 no vita sonia ity fifanaraham-piaraha-miasa eo amin’ny roa tonta ity ary izao nahazo fankatoavana tamin’ny fahefana mahefa izao. Lelavola mitentina 114 miliara Ariary avy amin’ny banky Afrikanina momba ny fampandrosoana no ampiasaina amin’ny fanajariana ireo tandavanala miazo ny Faritra Atsimo Andrefan’ny nosy iny.
Miainga ao Vangaindrano izany ka hatrany Faradofay ary Toliara mipaka any amin’ny Distrikan’i Manja. Araka izany, tsy ho ela dia hanomboka ny tetikasam-panajariana tafiditra indrindra ao anatin’ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny fanatsarana ny tontolon’ny varotra. Tetikasa izay mifandraika amin’ilay tetikasan’ny Filoham-pirenena hamerenana an’i Madagasikara ho nosy maitso. Hita taratra ihany koa fa mafy orina tanteraka ny fiaraha-miasa eo amin’i Madagasikara sy ny Banky Afrikanina ho an’ny fampandrosoana. Ity farany izay vonona ny hanampy an’i Madagasikara, tetikasam-pampandrosoana maro no hifanohanan’ny roa tonta.